Madaxweyne Siilaanyo oo Tacsi u diray qoyskii iyo qaraabada uu ka baxay sheekh Maxamed Muumin. |
Madaxweyne Siilaanyo oo Tacsi u diray qoyskii iyo qaraabada uu ka baxay sheekh Maxamed Muumin.
TACSI MADAXWEYNE -29/03/2016
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Siilaanyo, isagoo ku hadlaya magaciisa iyo ka shacbiga Somaliland, waxa uu dhambaal tacsi ah u dirayaa qoyskii, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxay marxuum Sheekh Maxamed Muumin Aadan, oo ahaa gudoomiyihii shirkada TELESOM ee Gabiley oo ku geeriyooday Gabiley.
Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey Sheekh caalima oo door muhiima ka soo qaatay fidinta aqoonta, gaar ahaan tan diinta Islaamka iyo dib u dhiskii dalka, ummaddana ku dhex lahaa mansab iyo maamuus, kana mid ahaa haldoorka iyo waxgaradka gabiley.
Madaxweynuhu waxa uu marxuumka Alle uga baryay inuu naxariistii janatu fardawsa ka waraabiyo qoyskii, qaraabadii, eheladii, asxaabtii iyo shacbiga Somaliland ee uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo.